नयाँ खाता खोल्नको लागि अफशोर बैंक खाता लागतहरू
अफशोर बैंक खाता लागत
धेरै व्यक्ति स्थापना गर्दछन् अफशोर बैंक खाताहरू मुद्दा मुद्दा बाट र वित्तीय गोपनीयता को लागी सम्पत्ति सुरक्षा को लागी। तपाईं ड्रिल किन्नुहुन्न किनकि तपाईं ड्रिल चाहानुहुन्छ। तपाईं एक किन्नुहोस् किनकि तपाईं प्वाल चाहनुहुन्छ। त्यसोभए, हामीले केवल यो सोध्न आवश्यक पर्दैन, "खाता अफशोर स्थापना गर्न र यसलाई कायम राख्नको लागि कति खर्च लाग्छ?" हामीले यो पनि सोध्नु आवश्यक छ, "सम्पत्ति संरक्षण र वित्तीय गोपनीयता को लागत के हो?"
त्यसोभए सम्पत्ति संरक्षण र वित्तीय गोपनीयताका लागि पहिलो नियम तपाईको आफ्नै नाममा खाता खोल्नु हुँदैन। यसलाई एक अपतटीय निगम, LLC वा ट्रस्टको नाममा खोल्नुहोस्। मानौं तपाईको नाम प्याट स्मिथ हो। तपाईं बैंक बाट पैसा सडक तल एक खाता अफशोरमा "पैट स्मिथ" द्वारा आयोजित। तार स्थानान्तरण ट्रेलले लामो समयको रेकर्ड छोड्दछ कि तपाईंसँग एक खाता अफशोर छ। त्यसकारण हामी प्राय: कम्पनी वा ट्रस्टको नाममा अफशोर बैंक खाताहरू खोल्दछौं।
यसले गोपनीयता बढाउँदछ किनभने तार भित्र र बाहिरका साथै अन्य स्थानान्तरण हुन्छ अपतटीय बैंकिंग लेनदेन एक कम्पनी को नाम मा आयोजित गरीन्छ, व्यक्तिको होईन। एक अपतटीय बैंक खाता खोल्नको लागि सेटअप शुल्क प्राय: $ 550० देखि 1,250 १,२1,685० बीचमा हुन्छ। यो बैंक र कार्यक्षेत्रमा निर्भर गर्दछ। एक अपतटीय कम्पनी सामान्यतया $ १2,495 र $ २2,235 between बीचमा चल्छ। त्यसो भए, दुबै कुल जम्मा २,२3,745 डलरदेखि XNUMX XNUMX। हो।
कति अपतटी बैंकहरू छन्?
अनुसार Quora, विश्वमा अनुमानित १,,14,600०० बैंकहरू छन् यो लेख को रूप मा। यद्यपि धेरै थोरै बैंकले विदेशीहरू, विशेष गरी अमेरिका, बेलायत, क्यानडा वा अष्ट्रेलियाका लागि खाता खोल्ने छन्। साथै, त्यहाँ सेवा स्तरको एक विस्तृत श्रेणी छन् stupendous र सन्तोषजनक देखि सरासर अप्रिय। तपाईंको पैसा सुरक्षित हुनेछ? के तपाई बैंकरहरुलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? यसकाे बारेमा साेच। यो तपाईंको पैसा हो। तपाइँ सुरू रेखाको ठीक ठीक एक सुखद र सुरक्षित बैंकिंग अनुभव चाहनुहुन्छ।
त्यहाँ सुपर सेफको एक संख्या हो, ठूलो सेवा प्रदान गर्ने बैंकहरू। तर त्यहाँ त्यहाँ धेरै बैंकहरू छन् सही इन्टरनेटको वरिपरि बम्बल गरेर एक पत्ता लगाउन। राम्रो तरीकाले पत्ता लगाउनु भनेको त्यहाँ पहिले भएको कसैलाई सोध्नु हो; विशेष गरी कोही व्यक्ति जसले हजारौं व्यक्तिको लागि अपतटीय खाताहरू स्थापना गरेको छ। त्यसो भए, एक विशेषज्ञ किराया। यो पहिलो पटक सही प्राप्त गर्न यो सानो लगानीको लायक हुनेछ। यदि तपाईं अधिक जानकारी चाहानुहुन्छ भने यस स्क्रिनमा फोन नम्बर र परामर्श फारम छ। पुग्नुहोस् र यसको फाइदा लिनुहोस्।
अफशोर बैंकिको लागि एक आवेदन आवश्यक पर्दछ, परिश्रम र तपाईंको खाता सक्रिय गर्न प्रारम्भिक जम्मा। अनुप्रयोग सामान्यतया सीधा हुन्छ। यसमा तपाईंको नाम, ठेगाना र टेलिफोन नम्बर छ। तपाईं सामान्यतया कति जम्मा गर्ने र फिर्ता लिन चाहानुहुन्छ र अन्य जानकारीको एक मोटा अनुमान दिनुहोस्।
निश्चित, तपाइँ गोपनीयता चाहानुहुन्छ। तर तपाईं यति गोपनीयता चाहनुहुन्न कि कोही तपाईं बैंक मा हिंड्न सक्छ र आफ्नो नगद फिर्ता पाउन सक्छ। त्यसोभए, लगनशीलता, जस्तै तपाईंको राहदानीको एक notarized प्रतिलिपि, एक मूल उपयोगिता बिल र संदर्भ पत्र आवश्यक छ। उनीहरूलाई यो जान्नु आवश्यक छ कि यदि कसैले कल, ईमेल वा बैंकमा हिँडेको पैसा सोध्न कि यो वास्तवमै तपाईं हुनुहुन्छ। तपाईंको जानकारी गोप्य हुनेछ। तर तपाईं चाहानुहुन्छ कि पैसा तपाईं समक्ष जानुहोस्, तर कोही 'जो' तिनीहरू होईन भन्छन्। उनीहरूले परिचय कागजातहरूको अनुरोध गर्नुको यो ठूलो कारण हो।
यो एक आर्थिक स्थिरता कारक हो जब कुनै देशवासीले आफ्नो बैंकलाई सुरक्षित र सुरक्षितको रूपमा सोच्दछन्। यो एक विश्वव्यापी सिद्धान्त हो। त्यसो भए, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बैंकि standards मापदण्डहरू ल्याउन स्विजरल्याण्डको बासेलमा भेला हुन्छन्। बैंकको सम्पत्तिको तुलनामा बैंकले कति debtण लिन सक्षम हुनुपर्दछ? कति नगद हातमा राख्नु पर्छ? उनीहरूले अपराधिक कमाई र आतंकवादी कोषलाई प्रणालीबाट टाढा राख्न कस्ता कदमहरू चाल्नु पर्छ?
एक सब भन्दा लोकप्रिय अफशोर बैंकिंग क्षेत्रको एक केम्यान टापु हो। यहाँ तपाईं एक को बारे मा पढ्न सक्नुहुन्छ केम्यान कम्पनी र खाता.
त्यसोभए, बैंकहरूले आवश्यक परिश्रमको अर्को कारण पनि हो कि तिनीहरू "राम्रो मान्छेहरू" लाई स्वागत गर्न र "खराब मान्छे" लाई बाहिर राख्न चाहन्छन्। तपाईं गोपनीयता चाहन सक्नुहुन्छ। तर तपाईं आफ्नो पैसा सुरक्षित र पहुँचयोग्य पनि चाहानुहुन्छ। त्यसकारण, तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय नियामकहरू बैंक बन्द गर्न र तपाईंको पैसा स्थिर गर्न चाहनुहुन्न। यदि तपाईं ओसामा बिन लादेनको पुनर्जन्मको साथ एक बैंक साझा गर्नुभयो भने यो हुन्छ। बैंकरहरू कागजात पहिचानको लागि मात्र सोधदैनन् किनकि तिनीहरू अज्ञात छन्। तिनीहरू तपाईं र अन्य जम्माकर्ताहरू सुरक्षित भएको चाहन्छन्। यसबाहेक, तिनीहरू लापरवाह प्रणालीमा नराम्रो मान्छे स्वीकारेर उनीहरूको बैंकि lic लाइसेन्स हराउन चाहँदैनन्।
किन तिनीहरू अपवाद गर्दैनन्
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आवश्यकता अनुसार यस परिश्रमका सबै चीजहरू स्वतन्त्र छैन। यसको लागि पैसा खर्च हुन्छ। त्यसोभए, किनकी एउटा खाता अफशोर खोल्नाले सेटअप शुल्क समावेश गर्दछ। बैंकले उनीहरूको इजाजतपत्र गुमाउने जोखिम लिन सक्ने छैन र परिश्रम प्रक्रिया छोड्न र तपाईंको ग्राहक (KYC) नियमहरू छोड्नेछ। तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं राम्रो मान्छे वा राम्रो ग्याल हुनुहुन्छ। यद्यपि बैंकले तपाईंलाई चिन्दैन। त्यसोभए, तिनीहरूले तपाइँलाई यो प्रमाणित गर्न आवश्यक पर्दछ।
बैंक नियमहरू बाइपास गर्दैन किनभने तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो मुखबाट आगो शूटिंग संग कल। तिनीहरूले एक अपवाद बनाउँदैनन् किनकि तपाईं माथिबाट तल पस्दै हुनुहुन्छ एक निर्देखी बन्दर झैं किनभने तिनीहरू धेरै लामो लिईरहेछन् वा धेरै जानकारीको लागि सोधिरहेका छन्। स्थानीय नियामकहरूले नियमित रूपमा बैंक अडिट गर्दछन्। उनीहरूले यो सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ कि बैंकले प्रत्येक खाता सेटअपको लागि सबै बक्सहरू जाँच गरेको छ। त्यसो भए, आशा नगर्नुहोला कि तपाईलाई झिम्काइ र हप्काइ दिनुहोस्। त्यो हो, तिनीहरूले तपाईंलाई टाउकोमा थाम्नेछैनन् किनकि तपाईं राहदानी वा बैंक सन्दर्भ पत्र लिन धेरै अल्छी हुनुहुन्छ। तिनीहरूले तपाईंको लागि इजाजतपत्र गुमाउने खतरामा छैनन्। तिनीहरू बरु केवल कार्यक्रममा जान सक्ने अर्को ग्राहकमा जान्छन्।
अफशोर बैंकिंग शुल्क
मासिक मर्मत शुल्क $ २० देखि $ १०० सम्म चलाउन सकिन्छ, वा यस्तै। तार स्थानान्तरण शुल्क सामान्यतया $ २ to देखि $$ from सम्म हुन्छ। यदि तपाईं खाता चाहानुहुन्छ जहाँ तपाईं शेयर बजारमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ संस्थानहरू छन् जहाँ तपाईं आफैले व्यापार गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ संस्थानहरू पनि छन् जहाँ तपाईंसँग अनुभवी मनी म्यानेजरले तपाईंको अनुमोदनको साथ लगानीहरू गर्न सक्दछन्। पैसा प्रबन्धकहरू सामान्यतया उनीहरूले प्रबन्ध गरेको पैसाको एक सानो प्रतिशत शुल्क लिन्छन्। स्वाभाविक रूपमा, शुल्कको प्रकारहरू र चार्ज गरिएको रकम संस्था द्वारा भिन्न हुन्छ। तिनीहरू यहाँ उल्लेखित दायरा भित्र वा बाहिरका हुन सक्छन्।
निक्षेपहरूमा भुक्तानी गरिएको ब्याज दरहरू, मासिक शुल्कहरू र खाताहरूको प्रकारहरू भिन्न हुन्छन्। धेरै अपतटीय वित्तीय संस्थाहरु संग निक्षेपकर्ताहरु आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धी दरहरु छन्। अफशोरमा भुक्तानी गरिएको ब्याज दरहरू घरेलु संस्था भन्दा उच्च हुन जान्छन्। तपाईंको अफशोर बैंक खाता स्थापना गर्ने प्रक्रियामा प्रशोधन शुल्क, कुरियर शुल्क र केही साना विविध बिभिन्न लागतहरू सामेल छन्। यी चीजहरूमा नोटरी चार्जहरू आदि जस्ता चीजहरू समावेश हुन सक्छन् अफशोर कम्पनी डट कमले हजारौं व्यक्तिहरूलाई निजी अपतटीय खाताहरू, कम्पनीहरू र विश्वास खोल्न मद्दत गरेको छ। त्यसो भए हाम्रो लागि सम्पर्क राख्नुहोस् र हामी आज ती आवश्यकताहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौं।
तपाईको लागि कुन न्यायक्षेत्र र बैंक सही छ पत्ता लगाउनुहोस् सजिलो छ। केवल माथिको संख्या वा सोधपुछ फारम प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईंको आवश्यकताको वर्णन गर्नुहोस्।
अन्तिम अपडेट अक्टुबर १ 21, २०२० मा भयो